Qodobbada Lagu Faaqiday Shirka Soomaaliya Loogu Qabtay London Iyo Raysal-Wasaare May Oo Si Mugle U Hadashay | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Qodobbada Lagu Faaqiday Shirka Soomaaliya Loogu Qabtay London Iyo Raysal-Wasaare May Oo Si Mugle U Hadashay
London(Hubaal):- Magaalda London waxaa shalay si rasmi ah uga furmay Shirka lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo ay marti-gelisey dawladda Britain. Madaxda ka qeybgashay Shirka, ayaa si weyn uga hadashay xaaladda Ammaanka Soomaaliya iyo sidii Soomaaliya looga caawin lahaa inay si buuxda ula wareegto Masu’uuliyadda Nabadgelyadeeda. Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, Antonio Guterres, ayaa carrabka ku adkeeyay ahmiyadda ay leedahay alkumidda barnaamij ay Soomaalida hormuud u tahay oo lagu tababarayo ciidammada qaranka Soomaaliya. Ra’iisal wasaaraha Britain, Theresa May ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay iskaashi dhaw oo ku aadan qaabka loo wajahayo dhismaha ciidan qaran oo ay Soomalaiya leedahay. Waxay sheegtay in ciidamada AMISOM aysan maareyn karin sugidda amaanka ee Soomaaliya, loona baahanyahay in si deg deg ah loo dhiso ciidammada Soomaaliya oo weliba laga qeyb geliyo kuwa maamulada haatan jira laguna salaynayo qaabka federaalka. ” Heshiiska dhinaca amaanka ee aan halkan ku soo bandhigayno waxa lagu salayn doonaa heshiiskii taarikhiga ahaa ee ay dhowaan gaareen dowlada Federaalka iyo maamulada ka jira dalka oo ka heshiisyey tirada ciidanka, halka ay ka hawlgeli doonaan, maalgelintooda iyo cidda hagaysa” ayay tiri, ra’iisal wasaaraha Britain. Waxaa sidoo kale kulankan ka qeybgalay madaxda dalalka ku tabarucay howlgalka AMISOM. Madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta, ayaa ku baaqay in 400 oo askeri oo dheeraad ah lagu daro ciidammada AMSIOM oo gaaraya hadda 222,000. Waxa uu sheegay in AMISOM aysna ka bixi karin Soomaaliya ilaa iyo inta si buuxda loo dhisamyo ciidammada qaran oo ay Soomaalid leedahay. Dadaalada kala duwan ee ku aadan dhismaha ciidan qaran
Britain ayaa dhawaan magaalada Baybdho ka billaabi doonto barnaamij ay ku tababareyso ciidammada qaranka Soomaaliya. Isku Taga Imaaraadka ayaa lagu wadaa inuu isna dhiso xarun casri ah oo lagu tababari doono ciidamada Soomaaliya, Maraykanka wuxuu tababarayaa oo uu qalabaynayaa ciidmada Danab. Turkiga ayaa isagana wada tababaridda siinaya sarakiisha ciidanka soomaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed cabdullaahi Farmaajo ayaa ku baaqay in si buuxda cunaqabataynta hubka looga qaado Soomaaliya. ”Cunaqabteyta hubka ee sanadooyinka badan saaran soomaaliya, waxay caqabada ku noqotay oo ay aad u xayirtay awoodda aan u leenahay in aan soo iibsano hub culus, inkastoo ay jiraty in si qeyb ahaan cunaqabateyntaas la qaaday 2013-kii” ayuu yiri Madaxweynaha. Farmaajo waxa uu sheegay in dowladdiisu ay la shaqeyn doonto golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay sidii cunaqabatayntaasi gebi ahaanba meesha looga saari lahaa. Madaxweyne Farmajo waxa uu sheegay in markii uu xilka qabtay uu muhiimadda koobaad siiyay sidii wax looga qaban lahaa xalaadda abaarta ee dalka si looga hortago in ay dhacdo xaaladdii sanadkii 2011kii. Farmaajo, ayaa u mahadceliyay hoggaamiyeyaasha caalamka iyo qurbo joogta Soomaaliyeed oo uu sheegay in ay ka jawaabeen baaqii dowladdiisa ee ahaa in gargaar lala soo gaaro shacabka ay abaartu ku habsatay. Madaxweyno Farmaajo wuxuu sidoo kale sheegay in abaaraha dalka ka jira ay barakiciyeen ilaa 600,000 oo qof tan iyo bishii Nofembar ee 2016, wuxuuna ugu baaqay caalamka in laga hortago in dalka ay ka dhacdo xaalad bani’aadanimo iyo sidoo kale in diiradda la saaro sidii looga soo kaban lahaa abaarta.
Dowladda Britain ayaa sidoo kale sheegtay in ay ka go’antahay in ay ka hortagto in Soomaaliya ay macaluul ka dhacdo, ayna ku baaqeyso in la kordhiyo kaalmada bani’aadanimo ee Soomaaliya. Waxaa jirta cabsi ah in haddii xaaladda Soomaaliya aan hadda wax laga qaban ay dhici karto in ay dib ugu laabato colaad hor leh. Saameynta abaarta ka jirta dalka ayaa waxaa ka dhashay nafaqadarro aad u baahsan, iyada oo ay sii kordheysa khatarta ay wajahayaan carruurta. Hay’adda dhallaanka u qaabilsan Qarmada Midoobey ee UNICEF ayaa sheegeysa in qiyaastii 1.4 milyan oo carruura ah ay hayso nafaqadarro amaba ay qarka u saran yihiin xaalad nafaqadarro. Ku dhawaad 40,000 oo carruur ah ayaa joojiyay in ay xaadiraan fasallada sababo la xidhiidha abaarta. Qiyaastii 6.2 milyan oo qof oo Soomaali ah ayaa u baahan gargaar aadannimo, iyadoo 1.5 milyan oo ka mid ah ay yihiin haweenka nugul, waxana feejignaan gaara in la siiyo u baahan 130,000 oo haween uur leh. Abaaraha sii kordhaya meelaha qaar, barakaca ka dhasha khilaafyada hubeysan ayaa keena baahiyo deg deg ah.